नेतामाथि कुन्जनाको आक्रोश: कसरी अनुहार देखाउनु हुन्छ ?
गफगाफ -हाँस्य कलाकार तथा सामाजिक अभिनयान्ता द्वय सीताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरेले पछिल्लो समय कलाकारितामा भन्दा पनि सामाजिक सेवा र काम बढी गरेको कुरा त सबैलाई अवगत नैछ । यो जोडीले २०७२ सालमा गएको महाभुकम्प पछि घरबार बिहिन भएका केही परिवारका लागि घर समेत निर्माण गरिदिईसकेका छन् । उनीहरुले देश र जनाताका लागि गरेको कामले सम्पूर्ण देशवासी नै खुशी छन् । केहीले धुर्मुस अर्थात सीताराम नै देशको प्रधान मन्त्री हुनुपर्ने सुझाव दिँदै पनि आएका छन् । उनीहरुको बारेमा यस्ता थुप्रै ट्रोलहरु पनि भईरहेका हुन्छन् । उनीहरुले देशको लागि गरेको काम देखेर केहीले उनीहरुले अब राजनीतिमा प्रवेश गर्नु पर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । तर धुर्मुस सुन्तलीले भने अहिले नै राजनीतिमा लाग्ने विषयमा केही पनि सोचेका छैनन् ।
हालै मात्र यहि विषयमा हामीले उनीहरुसँग कुराकानी गर्ने मौका पायौँ । यस विषयमा बोल्दै सीतारामले भने, ’हामीलाई राजनीतिमा लाग्ने ईच्छा चाहना अहिले नै छैन । तत्काल हामीले यस विषयमा केही पनि सोचेका छैनौँ । अनि हामीले राजनीतिमा लाग्नका लागि सामाजिक काम गरेका पनि हैनौँ । हाम्रो काम राजनीतिको जग खन्नका लागि हैन । काम गर्ने सिलसिलामा अघि बढिरहँदा खेरि नेपाली दिदी बहिनी दाज भाईहरुले हामीलाई जुन किसिमको विश्वास गर्नु भएको थियो हामीले गरेको काम पनि विकास निर्माणकै काम हो । देश बनाउन सकिन्छ । विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो । ईच्छा शक्ति भएको खण्डमा देश विकास गर्नको लागि पञ्च वर्षिय योजना नै बुनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी देशको नेतृत्व गर्न नसक्ने हैन । उनले र मैले देश बनाउन सक्छौँ । त्यसको खाका त्यसको भिजन कुन तौर तरिका अपनाएपछि देश बन्न सक्छ भन्ने कुराको मुलभुत आधार र सुत्रहरु हामीलाई थाहा भईसकेको छ ।
समाज रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्छ । समाजलाई एकिकरण गरियो भने राष्ट्र बनाउन धेरै समय लाग्दैन । भोलिको कुरा भोलिलाई नै छोडिदिउँ । भोलिका दिनमा गएर सबै नेपाली दाजु भाई तथा दिदी बहिनीले तपाईँहरुले देश विकास गर्नुपर्छ । नेतृत्व लिनु पर्छ । देश बचाईदिनुस बनाईदिनुस भनेर सामूहिक आवाज आएको खण्डमा हामी त्यो कुरामा पछि हट्ने छैनौँ ।’
सीतारामले यति भनिसकेपछि कुन्जनाले पनि अगाडि थपिन्, ’यसमा म के भन्छु भने देश बनाउन तपाईँहरु चहियो । देशलाई तपाईँहरुको खाँचो छ । यस्ता कुराहरु सुन्छु । मलाई लाग्छ सकारात्मक सोच भएको मान्छे नै देश विकासको लागि खाँचो छ । हामी वा अरु कोही हैन । देशलाई लिड गर्न सक्ने मान्छेको खाँचो छ । पोलिटिकल हिसाबले सोच्दा खेरि हामीलाई एउटा हत्यारा समाउन पनि ठूलो सञ्जाल बुनेको जस्तो कहाँबाट कहाँ, कहाँबाट कहाँ उसले उसलाई दुनियाँ दोषि देखायो । हैन भको चाहि के छ ? मलाई अचम्म लाग्छ । अनि कुरा चाहि बाहिर बाट हस्तक्षेप सम्मका कुरा पुग्छन् । सामान्य रुपमा लिने हो भने त्यहिको त्यहि एउटा हत्यारा हिनिरहेको हुन्छ । यो चािह किन कारबाही हुन सक्या छैन ।
यो सबै राजनीतिक खिचातानी हो । एउटाको शासनमा अर्कोले सफल हुन नदिने । अनि अर्कोको पालो आउँछ अर्कोले सफल हुन नदिने । यहि कारण हत्यारा पत्ता लागेको छैन । पैला हाम्रो आमाहरुको पालामा केही हुने बित्तिकै सबैलाई थाहा हुन्थ्यो । ठूलो खैला बैला हुन्थ्यो । अहिले भने यहि को यहि हत्यारा हिनिराको हुन्छ । तर कसैले समाउन सकेको छैन ।
अहिले यहि को यहि अपराधी हिन्छ । मान्छे मर्छ । हत्या हुन्छ । कसैलाई कसैको मतलब छैन । देशको त्यो अवस्था बन्यो । यो सबै भएको बाहिरि हस्तक्षेपले हैन । हामी बाहिरको देशको सिमाना बढाउन गाको होर हामीलाई आफ्नो देश विकास गर्न गाह्रो भएको ? देशमा ठाउँ नभएर विकास नगर्या हो र हामीले ? कि देश सानो भयो ठाउँ पुगेन अनि बाहिरको सिमाना ल्याएर बढाएर विकास गरौँ भनेर देश विकासमा ढिला भएको हो र ?
ए बाबा त्यहि भत्किरहेको बाटो टाल्नलाई किन यति गाह्रो ? एउटा दुख परेको घरमा गएर समवेदना तपाईँले प्रकट गरिदिनुस त त्यो परिवार कति खुशी हुन्छ । एउटा नेतृत्व तहमा बसेको मान्छेले दुख परेकाहरुलाई सान्त्वना दिने थमथम्याउने म छु । तपाईँको अपराधीलाई म समात्छु भनेर हेर्नुस त उहाँहरु कति खुशी हुनुहुन्छ ।
हाम्रो देशमा कति बालबालिकाहरु स्कुल जान पाएका छैनन् । अनि सरकारले कहिले काही हामीसँग अािर्थक समस्या छ भनेर भनिरहेको हुन्छ । अनि हामीले पनि त हामीसँग प्रशस्त पैसा भएर समाज सेवा गर्न शुरु गरेको त हैन नि । हामीलाई सबै नेपाली दाजु भाई, दिदीबहिनीहरुले नै सहयोग गर्नु भएको हो ।
अनि आज सरकारले देश बनाउँछु भन्दा कुन चाहि नेपालीले सहयोग गर्दैन होला के । यो नेतृत्व तहमा हामी चाहिएको हैन । त्यहाँ बसेका मान्छेहरुले चाहि यति पनि किन नगर्या ? देश विकास गर्न भनेर ठूलो जटिलता देखाउँछन् मान्छे । टाई सुट बुट लगाएुर र विदेश गईरहेका हुन्छन् । घरि कहाँ घरि कहाँ गईरहेका हुन्छन् । हैन त्यो विदेशमा किन गाको ? यता बौद्ध जोरपाटीको बाटो टाल्नलाई त्यता सोध्न गाको हो की । काठमाण्डौको क्षमता भन्दा बढी गाडीहरु भएर जाम भईरहेको छ भनेर त्यो बुझ्न गाको होकी । मलाई अचम्म लाग्छ ।
देश विकास गर्नलाई, समाज परिवर्तन गर्नलाई राजनीति गर्नै पर्छ भन्ने छैन । घरमा छोरीले पढेपछि बाऊले शुल्क तिर्दिनु परेन । छोरा छोरी चाहि टन्न जन्माउने अनि फिस तिर्ने बेलामा नतिदिर्ने । मैले भन्न खोजेको चाहि देशका यत्रा जनतालाई पाल्छु । सबैलाई सुख, शान्ती सयल गराउँछु भन्दै नेतृत्व तहमा बसेपछि जनताको सानो माग पूरा गर्न नसक्नेले त त्यहाँ बस्नु पनि किन ?
चुनाव आउँदा खेरि चाहि यो पार्टी उ पार्टी मेरो मान्छे तेरो मान्छे भनेर जिताउने । यहि कारण घरमा लोग्ने स्वास्नीकै झगडा पर्छ । लोग्ने एउटा पार्टी श्रीमती अर्को पार्टी । अनि यो सब देखेर बच्चाहरु ट्वाँ पर्छन् । त्यो बच्चलाई त्यहाँ देखि नै राजनीतिमा बितृष्णा हुन थाल्छ । राजनीति आफैमा नराम्रँे हैन नी त । तर यसलाई राम्रो बनाउन सकिएको छैन ।
हामीले पनि त देशमा भुईचालो जाला र हामीले देश विकास गरौँला भनेर सोचेका थिएनौँ । हामी त त्यतिबेला अमेरिकामा बुढाले बुढीलाई अनि बुढीले बुढालाई गाली गरेर दुई चार पैसा कमाउँदै थियौँ । एउटा सामान्य धुर्मुस सुन्तली भएर विदेश कस्तो रहेछ हेर्दै थियौँ । तर हामी त्यहाँबाट फर्केर समाज सेवी बन्यौँ । यो त हाम्रो प्लान अनुसार भएको हैन ।
यति सम्मको सोचाई अहिले विभिन्न काण्डहरुले मचाई रहेको छ । त्यस कारण यस्तो किसिमको राजनीति गर्नु चाहि छैन । तर देश विकास गर्ने ठाउँमा, काठमाण्डौलाई हरा भरा बनाउने ठाउँमा आउनुस एक भएर काम गर्नु पर्यो भने त्यसलाई राजनीति भन्छन् की के भन्छन् तपाईँहरुको भाषामा जान्नुस । त्यो काममा चाहि हामी अघि बढ्न सक्छम् ।’
कुन्जनाले यति भनेपछि सीतारामले पनि उनको कुरामा सहि थापे । फेरि कुन्जनाले थपिन, ’मलाई धेरैले आक्रोशित भन्नुहुन्छ । तर अहिले नेपालमा बस्ने सबै नेपाली आक्रोशित हुने बेला छ । कतै जानु पर्यो भने घण्टौँ जाममा बस्नुपर्छ । बाटो साँघुरो । गाडीको चाप बढी । अनि एउटा बाटो जाम हुने बित्तिकै चारवटा बाटो जाम हुन्छ । न दायाँ जान सकिन्छ । न बायाँ । स्कुल जाने बच्चाहरु समयमा स्कुल पुग्दैनन् । अफिस जाने आमा बुवा समयमा पुग्दैन । बिरामीलाई समयमा अस्पताल पुर्याउन सकिएको छैन । काठमाण्डौको जाममा परेपछि उम्किनै मुश्किल छ ।
अनि त पारा तात्छ । हरेक नेपालीको पारा तात्ने काम भईरहेको छ । किन देश सिस्टममा चल्न सकेको छैन । यति पनि व्यवस्थित गर्न नसक्नेले के राजनीति गर्नु ? के नेतृत्व तहमा बस्नु ? सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित वर्गलाई एउटा ठूलो प्रश्न छ, कसरी अनुहार देखाएर हिड्न सक्नुहुन्छ ? म पोईल गएर मेरो छोरीको अगाडि मैले कसरी मुख देखाउने होला । म कति निर्लज्ज हुन्छु होला । त्यसरी बुझिदिनु भयो भने राम्रो हुने थियो । देशमा जता जाउँ कतै पनि मान्छेलाई सन्तोष छैन । कुनै पनि नेपालीलाई सुख शान्ती छैन ।
जो नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई यी तीन करोड जनताको श्राप त लाग्छ लाग्छ ।’